Akụkọ - Innovation ad Ngwa etinyere maka ekwentị
Innovation ad Ngwa okike maka ikpe ekwentị
Ihe Ntanetị UV na-acha ọkụ na Ogwe ekwentị
In nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka igwe obibi akwụkwọ ekwentị. Agbam ume na ekwentị gị Case Printing Business Ugbu a! O doro anya na ịchọta ya na Mserin. Anyị bụ ndị na ngwa nbipute UV na Guangzhou, China.
Ekwentị ndị ọhụrụ kachasị mma - mana ha nwere ike ịka mma! N’ezie, ekwenti gi kwesiri idozi uto na omume gi. Maka ndị ọkachamara na-ebipụta akwụkwọ, igwe na-ebi akwụkwọ igwe ekwentị na-enye ndị ahịa ọchịchọ siri ike - ma na-ahapụ ha ka ha gosipụta ihe okike ha.
Ekwentị ikpe obibi akwụkwọ igwe bụ ọgbọ ọhụrụ nke nnukwu teknụzụ dijitalụ igwe obibi akwụkwọ UV na-enweghị mmachi nke ihe ọ bụla. Ma ihe a bụ plastik, akpụkpọ anụ ma ọ bụ PVC, enwere ike ịnweta mmachi ink na agba na-enwu gbaa. Anyị ekwentị ikpe nbipute nwere ike mbo mbuli gị na-ebi akwụkwọ azụmahịa site kpọmkwem ink ugboelu obibi, n'ihi na ya dịgasị iche iche nke ihe ịhọrọ, dị ka, ekwentị shei, akwụkwọ ịde ihe mkpuchi, laptọọpụ cover, na na.
Akpadoro ekwentị ahaziri iche bụ ihe niile ewu ewu maka ndị ọrụ ekwentị nke afọ niile. Ya mere, ekwentị na-ebi akwụkwọ azụmahịa na-egbukepụ egbukepụ dị ka ohere bara ezigbo uru.
Ekwentị ikpe na-ebi akwụkwọ: akpọchi nnukwu uru.
Nhọrọ kachasị mma Mserin MSL-2513 UV na-ebipụta akwụkwọ maka akara ikpe ekwentị.
Main Usoro Flow:
Ihe nbipu UV na ubi ikpe ekwentị, usoro mbipụta nkịtị bụ WW (nhọrọ enyemaka Enyemaka) + CMYK + Varnish (Nhọrọ)
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata atụmatụ zuru ezu biko zipụ ozi email na njikọ-patrick @ 163.com, Ọnụ na nyocha uru, nkwado akụrụngwa yana ọrụ ọrụ akọwapụtara gụnyere.
1, nhicha ekwentị ikpe elu na mmanya.
2, Mbipụta WW (Enyemaka nhọrọ enyemaka) + CMYK + VV (Nhọrọ).
3, UV gloss agba mkpuchi, na-eme ka o sie ike.
Post oge: Jan-10-2021